Gaudí - Njem site na nnukwu ọrụ ya dị ka Casa Batlló | Njem zuru oke
Casa Batlló na ọrụ ndị ọzọ dị egwu nke ọgụgụ isi Gaudí ị nwere ike ịga
Antoni Gaudí bụ otu n’ime nnukwu ụlọ na nnukwu onye nnọchiteanya nke ọgbara ọhụrụ Spanish. Dị ka ndị dị otú a, ọ hapụrụ anyị nnukwu ihe nketa nke ị nwere ike ịga leta taa iji nọgide na-enwe mmasị na ọrụ ya, nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị, anyị maara nke ahụ. Otu n'ime ha bụ Casa Batlló mana o nwere ọtụtụ ndị ọzọ anyị kwesịrị ịma ma ọ bụ bịarukwuo nso.
N'ihi ya, anyị ahọrọla ime a mebere njem site na ụfọdụ ọrụ akara ngosi na ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi. Ha niile nwere nke ahụ, imepụta ihe na iche echiche nke na-enye ha nsonaazụ pụrụ iche. Ihe nke gosiputara ya dika ihe omuma nke onwe. Ka anyị butuo maka na anyị ga njem!
1 Sagoni Familia nke Antoni Gaudí dere
3 Ogige Guell
4 Lọ Vicens
5 Capricho nke Gaudí
6 Lọ Booties
Sagoni Familia nke Antoni Gaudí dere
Basilica nke dị na Barcelona bụ otu n'ime ọrụ ndị a kacha eleta, ma wuo ya na 1882, ga-abụ otu n’ime ụka ndị kacha ogologo n’ụwa. N’agbanyeghị na o nwere ọtụtụ, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ nnukwu ọrụ ya. Nke a nọrọ ya ọtụtụ afọ nke ndụ ya na, ya na ya, ọ rutere n'oge eke, ugbua na njedebe ikpeazụ nke ọrụ ya, ebe ọ ga-abụ nnukwu nchịkọta nke ihe niile dị n'elu. Emere nke ka ukwuu n'ụlọ nsọ ahụ n'ụdị usoro ma e wezụga akụkụ nke crypt nke dị na Neo-Gothic. Shapesdị ọdịdị geometric enweghị ike ịkọ, enweghịkwa myirịta na okike. Ọ bụrụ n’ịabeghị leta ya, ị gaghị echefu oge akara ngosi a Antoni Gaudí!
N'okwu a, anyị na-ekwu maka ịmegharị ụlọ, nke dị na Paseo de Gracia na Barcelona. Anyị nwere ike ịsị na anyị nọ n'oge a na-ahụkarị nke Gaudí, ebe o mejupụtara ụzọ kachasị mma ya na nke ahụ bụ na mmụọ nsọ ya sitere n'okike. N'ikwu ya, nleta Casa Batlló nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị mma maka uche gị. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi nleta ahụ nwere ike ịdị na-enwe mmekọrịta mmekọrịta nke ukwuu site na ọgụgụ isi, ụda binaural ma ọ bụ ihe ngagharị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụzọ nke ijikọ onwe gị na ụwa Gaudí, nke ịhụ ihe ọ hụrụ ma ọ bụ mmetụta ọ nwere site na ihe ngosi ọdịyo. Ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche nke ga-aza ajụjụ ndị dị ka ihe sitere n'ike mmụọ nsọ ya, otu esi kee echiche nke ọgụgụ isi na ihe niile gbara ya gburugburu.
Na nleta a, ị ga-azaghachi ihe niile a na ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ị ga-ahụ ime ụlọ imikpu onwe gị nke ị ga-enwe ọ thanụ karịa puku ntaneti N'ime ha ị ga - achọpụta ihe nzuzo ya niile banyere mmalite ya na 'Gaudí Dome'. Mana ọ bụghị naanị ịhụ ga-ezuru, mana ụda kacha mma ga-agbachi gị gburugburu maka ụda olu 21 dị egwu na-ejide mmụọ nke okike na n'ezie, atụmatụ oke, ebe anwansi ga-adị karịa adị.
Mgbe ị masịrị mmalite ya ma ọ bụ mmalite ya, oge eruola ịbata n'uche Gaudí. Ihe dị ka ihe mgbagwoju anya! Ma na Gaudí Cube, ọ ga-enweta ya. Ime ụlọ ọhụrụ ebe o nwere akụkụ 6 nke nwere akụkụ LED. Na ya ị ga-enwe ike ịgbanwe nghọta niile nke eziokwu, ọ ga-akpọrọ gị gaa ụwa ọzọ, na echiche efu, mana na-enyere gị aka na uche niile, na-echezọghị na anyị nọ n'uche nke ọgụgụ isi. N'ezie, maka nke a, enwere nnyocha nyocha zuru oke n'azụ ya. Edere ọtụtụ eserese, yana ederede ma ọ bụ foto na ihe ndị ọzọ, site na enyemaka nke ọgụgụ isi, nyela ọrụ a ndụ. Anyị ga-eji anya ya hụ ihe bụ eziokwu na akara ọ hapụụrụ n’ụwa.
Kedu mgbe anyị na-abanye na Casa Batlló, anyị ga-anụ ụtọ ụfọdụ amụma nke ndụ ya, ihe oyiyi nke oge gara aga na ihe niile a bụ ụzọ isi gaa oge ya. Ihe omuma ohuru bu na site na ichota ihe osise, ihe ngosiputa nke etinyere n'ime ha gha amalite ntaneti ihe nkiri, si otú a achota ihe omuma banyere ulo na ezi na ulo. Iji mechaa nụ ụtọ ihe nketa ya niile mana na onye mbụ, na-eme ka ahụmịhe ahụmịhe nke a ga-ebi, opekata mpe, otu ugboro na ndụ. Na-anwa anwa ịchọta ihe ịtụnanya ya?
Na Mount Carmelo, northwest nke Barcelona, ​​anyị na-ahụ Park Güell, nke bụ ọrụ ọzọ a ma ama nke Gaudí. Mgbe anyị hụrụ ya, anyị ga-amata na ọ na-abanyekwa n'ọgbọ oge ya nakwa na ọ na-enwe usoro nke aka. N'ime ya anyị nwere ike ịchọta akụkụ kachasị iche dịka isi mmiri San Salvador de Horta ma ọ bụ echiche Joan Sales, site na ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ panoramic nke Barcelona. Naanị n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ na pavilions, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ọgụgụ kachasị ama. Ebe ọzọ ekwesiri ịga leta ma ọ bụrụ na ịmeelarị, ịgagharị ebe ahụ adịghị emerụ ahụ.
Ọ bụ ezie na ọrụ niile nke ụkpụrụ ụlọ nwere mkpa ha na ihe ịga nke ọma n’azụ ha, n’okwu a mgbe anyị na-ekwu maka ya Casa Vicens, anyị ga-ekwupụta na ọ bụ otu n'ime ọrụ mbụ ọ rụrụ mgbe ọ gụchara ụkpụrụ ụlọ. Yabụ ikekwe, ọ na-abawanye uru karịa, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Maka nke a, anyị nwere ike itinye ya na oge ọhụụ, ebe ọ bụ na ọ nwere ahịhịa ndị ahụ dị egwu nke Gaudí nwere mmasị na ya n'oge mmalite. Buildinglọ nke ekwuputara na saịtị nke ọdịbendị ọdịbendị ma mesịa bụrụ Ebe Nketa itagewa na 2005. Ọ na-ahapụ anyị nnukwu agba na facade, ekele maka mmezu ya.
Capricho nke Gaudí
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na imirikiti ọrụ ya dị na Catalonia, n'okwu a anyị ga-ekwu maka ya 'a whim' nke gara Comillas na Cantabria. A ghaghi imeghari ya na oge ọwụwa anyanwụ nke Gaudí, ebe seramiiki seramiiki bụ isi ihe na mgbakwunye mgbakwunye arches na brik. Dị ka ị maara n'ezie, ụlọ a ghọrọ ụlọ ngosi ihe nka, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ijuanya. Naanị ịnụ ụtọ ihu ụlọ ahụ, ọ ga-ejide gị!
Ebe ọ bụ na anyị emeghewo ụzọ na El Capricho, ọ na-esochikwa anya Blọ Botines. N'ihi na ọ bụ ihe ọzọ n'ime ụlọ ndị ahụ dị na mpụga Catalonia na karịa na León. Site na mmalite nke oge a, ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe yana ebe obibi n'ime afọ mbụ nke ndụ ya. Mana ugbua na 1969 e kwupụtara ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nke ọdịbendị ọdịbendị, eweghachitere ya na 1996. Taa, ọ nwekwara ụlọ ihe ngosi nka mana ọ na-echekwa ịma mma nke oge gara aga, isi ihe Gaudí na ngosipụta nke amamihe ya. Olee ndị ị garala?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Casa Batlló na ọrụ ndị ọzọ dị egwu nke ọgụgụ isi Gaudí ị nwere ike ịga
Asụsụ kacha mkpa nke India
Mmepụta sayensị na teknụzụ nke Australia